Zavatra 9 no hita sy atao any Toulouse | Vaovao momba ny dia
Zavatra 9 no hita sy atao ao Toulouse
Susana Garcia | | tanàna, General, Toulouse
Toulouse dia renivohitry ny Upper Garonne ary tanàna fahefatra lehibe indrindra any Frantsa, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo toerana mendrika farafahakeliny fialan-tsasatra faran'ny herinandro. Toulouse, toy ny tanàn-dehibe frantsay hafa, dia feno hatsarana sy toerana ara-kolontsaina, tranombakoka ary tsangambato na tranobe azo jerena. Noho izany dia namorona lisitra kely izahay miaraka amin'ny sasany zavatra hita ao Toulouse.
Misy zavatra izay fahagagana avy any Toulouse, ary fantatra amin'ny anarana hoe tanàna mavokely izy io satria vita amin'ny biriky ny ankamaroan'ny tranony. Androany dia mitazona hatsarana be dia be amin'ny ampahany taloha saingy manana rivo-piainana velona izy noho ny fiheverana azy ho tanàna oniversite, noho izany dia hahita tanàna velona isika, na andro na alina.
1 The Place du Capitole
2 Ny Capitol na ny lapan'ny Tanànan'i Toulouse
3 The Rue du Taur
4 Basilica an'ny Saint-Sernin
5 Convent an'ny Jacobins
6 Katedraly Saint-Etienne
7 Zaridaina hitsangatsangana
8 Kanto kely
9 Tanànan'ny habakabaka
Rehefa tonga tany Capitol Square izahay dia tonga fon'ny tanànan'i Toulouse. Tonga amin'ny alàlan'ny arabe amin'ny faritra taloha izy io, mba hahitana kianja lehibe misy ny filan-kevitry ny tanàna. Ao amin'ity kianja ity no misy ny hetsika manandanja indrindra eto an-tanàna, ary indraindray koa dia azonao atao ny mahita tsena amoron-dalana miaraka amin'ny vokatra isan-karazany, zavatra tena mampiala voly an'ireo mpizahatany. Raha te-hijanona amin'ny fitsidihantsika koa isika dia afaka mijanona amin'ny kafe sasany eny an-kianja mba hankafizantsika ny rivotra ivoho ny tanàna.
Ny Capitol na ny lapan'ny Tanànan'i Toulouse
Ny Capitol na ny lapan'ny tanàna no tranobe lehibe indrindra eo amin'ny kianja. Ao anatin'izany ny Foiben'ny Hall Town avy amin'ny tanàna sy ny Capitol Theatre. Trano vita tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary tsara tarehy na ao anatiny na any ivelany. Ao anatiny dia afaka mankafy ny efitranony ianao, voaravaka amin'ny fomba mirentirenty sy mahazatra, ary maimaim-poana ny fidirana. Ao anatiny dia afaka mankafy fresco amin'ny rindrina sy valindrihana ianao, jereo ny tohatra ary mitsidika ny efitrano Hall of the Illustrious sy ny efitrano Henri Martin, miaraka amin'ny sary hosodoko avy amin'ity mpanakanto ity.
The Rue du Taur
Ity no iray amin'ireo làlana mahaliana sy manintona indrindra eto an-tanàna. Ao anatin'izany dia misy magazay kely sy trano fisakafoanana hahafinaritra ny fijanonanao. Misy andiana trano miloko ary ny arabe dia mankany amin'ny Capitol Square hatrany.
Basilica an'ny Saint-Sernin
Ao Toulouse dia misy tranom-pivavahana maro azo tsidihina. ny Basilika Romanesque an'ny Saint-Sernin Natokana ho maritiora izy, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX ny fananganana azy, izay iray amin'ireo fiangonana Romanesque lehibe indrindra any atsimon'i Frantsa. Ao anatiny ianao dia afaka mankafy rivo-piainana mahafinaritra amin'ny trano tsotra, toy ny fomban'ny Romanesque, miaraka amin'ny taova kanto faha-XNUMX. Azonao atao ny miditra maimaim-poana, na dia tsy maintsy mandoa fidirana aza ianao raha hijery ny sisan'i San Saturnino.
Convent an'ny Jacobins
El trano fivahinianana an'ny Jacobins Izy io dia iray amin'ireo trano fivavahana lehibe eto an-tanàna. Tsotra io efi-trano io ary ivelany dia tsara tarehy tokoa, ary gaga izay rehetra miditra ao. Izy io dia manana nave tokana misy tsanganana eo afovoany, izay misy tohatra miloko hanohanana ireo vaises. Eo amin'ny rindrina dia ahitanao ny sary hosodoko tamin'ny vanim-potoana medieval ary ny alitara dia eo afovoan'ny trano fitokanana, fa tsy amin'ny farany. Tsy isalasalana fa fananganana fivavahana misy toetra mampiavaka azy io.
Toerana fitsidihana ihany koa ny katedraly Saint-Etienne, ka izany no ananan'ity tanàna ity trano fivavahana mahaliana. ny mampifangaro ny fomba Romanesque sy Gothic ny katedraly, ary koa mampifangaro biriky sy vato amin'ny fananganana azy. Aza adino fa ny biriky mena dia ampahany amin'ny tranobe maro eto amin'ity tanàna ity, satria vita tamin'ny tanimanga izay angonina avy any amin'ny fanambanin'ny Ony Garonne izy io.
Ny tanànan'i Toulouse koa dia tanàna misy faritra maitso maro. Manasongadina ny zaridaina japoney mahafinaritra. Ity zaridaina ity dia manana fomba aziatika tsy azo diso, ary tena mahaliana ny mandalo azy io. Misy zaridaina manandanja hafa ao an-tanàna, toa ny Jardin du Grand Rond na ny Jardin Pierre Goudouli. Ity dia fomba iray miala sasatra eo afovoan'ny fitsidihana tanàna.
Ao amin'ity tanàna ity dia misy tranombakoka marobe ihany koa izay azo tsidihina hahalala bebe kokoa momba ny tanàna sy ny lohahevitra hafa. Ao amin'ny Museum Saint Raymond no ilazana ny tantaran'ny tanàna ary ao amin'ny Museum of the Angustinos dia afaka mahita sary hosodoko sy sary sokitra amin'ny vanim-potoana samihafa ianao. Les Abattoirs Tranombakoka kanto ankehitriny sy toerana fampirantiana.
Ao Toulouse ny indostrian'ny aerospace, mba hahafahanao mitsidika ny valan-javaboary lehibe ao amin'ny City of Space. Toerana ahafahanao mankafy ny planeta roa, ny vinavina ary ny lohahevitra manontolo amin'ny indostria izay namela ny olona hahatratra habakabaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Zavatra 9 no hita sy atao ao Toulouse
Tolotra Puente del Pilar: Ny sidina sy hotely any London dia 320 euro fotsiny
Airbus A380, ny lehibe indrindra amin'ny rehetra